रुपा घटना ः प्रधानमन्त्रीले नबोल्नु दुःखद् | Today Express
रुपा घटना ः प्रधानमन्त्रीले नबोल्नु दुःखद्
दलित भएकै कारण काठमाण्डौंमा कोठा नपाएकी दलित अभियान्ता एंव पत्रकार रुपा सुनुवारको घटना चर्चामा छ । पहिले जात थाहा नपाउदा छोरी जस्तै लागेको बताएकी घरधनी सरस्वती प्रधानले रुपाको जात थाहा पाएपछी दिन्छु भनेको कोठा समेत दिईनन् । उनको निजि घर हो कोठा दिन्छु दिन्न भन्ने अधिकार उनकै हो । तर सुरुमा कोठा दिन्छु भनेकी सरस्वतीले दलित भनेर थाहा पाउने बित्तिकै कोठा दिन्न भन्नु सरासर रुपा सुनार र दलित समुदायमाथि कै अपमान नै हो । यही निर्णयमा पुगेकी रुपा सुनुवारले कोठा नदिएको भनेर नभई दलित भनेर अपमान गरेको भन्दै सरस्वती बिरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिइन् ।
सुरुमा उजुरी लिन नमानेको प्रहरीले बल्ल तल्ल उजुरी लियो र सरस्वतीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढायो । अनुसन्धानकै क्रममा सरकारका शिक्षामन्त्री रहेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरस्वतीलाई प्रहरी हिरासतबाट छुटाएर आफ्नै गाडीमा राखेर घर पु¥याए । राज्यको जिम्मेवार मन्त्रीले पीडितलाई न्याय दिन सहयोग गर्नु पर्ने बेला उल्टै पीडितको घाउमा नुनचुक छर्कदै पीडककै पक्ष लिनुले राज्यको सिङ्गो दलित समुदायमाथिको अपमान हो । व्यक्तिगत रुपमा सरस्वती प्रधान मन्त्री श्रेष्ठको आफन्त होलिन् या नातेदार जे भएपनि उनले रुपाको पक्षमा उभिनु आवस्यक थियो । किनकी रुपा जातकै कारण राजधानीमै कोठा नपाएका हजारौ दलित समुदाय र समग्र ६० लाख बढी शोषित पिडीत दलित समुदायको पक्षमा उभिएकी थिइन । तर मन्त्रीबाट अपेक्षा गरिए विपरीत भयो । फलस्वरुप मन्त्रीको कदमले स्वयम् आलोचित मात्रै भएनन् सदियौदेखी जात व्यवस्था विरुद्ध संर्घष गरीरहेका दलित समुदाय र तिनका पक्षधरहरुलाई समेत अचम्भित तुल्याईदियो । अहिले उनकै पार्टीभित्रबाट समेत उनको राजीनामाको विषय चर्केको समेत बाहिर आएको छ ।
‘यदी साँच्चै सच्चा र देशभक्त व्यक्ति उच्च तहमा हुन्थे र पुग्थे भने उसले मन्त्री श्रेष्ठको जस्तो कदम पक्कै चाल्ने थिएन । तर दःखको कुरो मन्त्री श्रेष्ठबाट नचाल्नु पर्ने कदम चालियो । जुन कदमले उनको पदीय मर्यादा र गरिमालाई उचालेन उल्टै थेचारिदियो ।’
सर्वप्रथम त प्रहरीले अनुसन्धान गरीरहेको विषयमा मन्त्रीले सिधै हस्तक्षेप गर्नु कमजोरी थियो । घट्नालाई अनुसन्धान गर्ने र मुद्धाको किनारा लगाउने जिम्मा प्रहरीको थियो र प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै थियो र गथ्र्याे पनि । प्रहरीको अनुसन्धानले जे गथ्र्याे त्यही हुने थियो । सरस्वती प्रधान आखिर छुट्ने नै थिइन् । धन्न मन्त्रीले अघि सरेर अलि अघि नै छुटाए । तर आम मान्छेले मन्त्री र देशको जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस्तो तल्लोस्तरको हर्कत अपेक्षा गरेका थिएनन् । गरेका हुदैनन् र गर्दैनन् पनि । यदी साँच्चै सच्चा र देशभक्त व्यक्ति उच्च तहमा हुन्थे र पुग्थे भने उसले मन्त्री श्रेष्ठको जस्तो कदम पक्कै चाल्ने थिएन । तर दःखको कुरो मन्त्री श्रेष्ठबाट नचाल्नु पर्ने कदम चालियो । जुन कदमले उनको पदीय मर्यादा र गरिमालाई उचालेन उल्टै थेचारिदियो ।
वास्तवमा कम्यूनिष्टहरु जातपातका विरोधी हुन् । उनीहरु जातपात मान्दैनन् भनेर हामीले सुन्दै, पढ्दै र देख्दै आएका हौँ । देशका धेरै ठाउँमा जातपात विरुद्धका थुप्रै सहभोज भएको, अन्तरजातीय विवाह गरिएको, गरिदिएको, दलितकै घरमा बसेर दलितकै हातले पस्केको भात खाएको पनि देखेकै हो । त्यस्ता गतिविधीमा काँग्रेस भन्दा एमाले, माओवादी नै अघि हुने गरेको पनि हो । कम्यूनिष्टको यस्तो सिद्धान्तको आधारमा मन्त्री श्रेष्ठले पनि सरस्वतीको पक्ष लिनु भन्दा दुबै जना (रुपा र सरस्वती)लाई संगै राखेर कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्दथ्यो । अहिलेको समयमा जातपात केही हैन । हाम्रो संविधानले जातजाती, वर्ग, लिङ्ग, धर्म सम्प्रदायको आधारमा भेदभाव गर्नु कानूनतः अपराध भनेको छ भनेर सरस्वतीलाई सम्झाउनु पर्दथ्यो । सरस्वतीले त्यति बुझीदिने बित्तिकै र आत्माआलोचना गर्ने बित्तिकै रुपाले उनलाई माफी दिन सक्ने थिइन् । किनकी रुपाको चाहना सरस्वतीलाई जेल हाल्नु भन्दा पनि कानूनमा कसैले कसैलाई जातपात र अन्य कुनै आधारमा पनि भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्ने चेत घुसाउनु थियो । यस्ता विषय एकेकले बुझ्दा नै सयौंले बुझ्ने हुन् । आज सरस्वतीले बुझिन् भोलि अर्कोले, पर्सि अर्कोेले गर्दै क्रमशः चेतनाको स्तरवृद्धिसँगै हट्दै र घट्दै जाने हो जातीय भेदभाव । त्यही सबक सिकाउन पनि रुपाले उनी विरुद्ध उजुरी दिइएकी हुन् । मन्त्रीज्यूले त्यही कुरा सरस्वतीलाई बुझाउन सकेको भए आज मन्त्रीको कद कति बढ्थ्यो यसै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
‘रुपाको चाहना सरस्वतीलाई जेल हाल्नु भन्दा पनि कानूनमा कसैले कसैलाई जातपात र अन्य कुनै आधारमा पनि भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्ने चेत घुसाउनु थियो । यस्ता विषय एकेकले बुझ्दा नै सयौंले बुझ्ने हुन् । आज सरस्वतीले बुझिन् भोलि अर्कोले, पर्सि अर्कोेले गर्दै क्रमशः चेतनाको स्तरवृद्धिसँगै हट्दै र घट्दै जाने हो जातीय भेदभाव । त्यही सबक सिकाउन पनि रुपाले उनी विरुद्ध उजुरी दिइएकी हुन् ।’
मन्त्रीज्यूले दुबै जनालाई आफ्नो खर्चमा सहभोज समेत गराउन सक्थे, त्यो पनि हुन सकेन । फलस्वरुप सिंगो दलित समुदायको आँखाको कसिंगर बन्न पुगे मन्त्री । दलित मात्र हैन अन्य मानव अधिकारका रक्षक÷संरक्षक जात व्यवस्थाका विरोधीहरुको नजरमा समेत उनी कसिंगर नै भए । पद र पावरको दम्भ धैरै दिन टिक्दैन । जनताको मन जित्नु नै पदमा रहे भन्दा पनि सयौं गुणा ठुलो हो भन्ने कुरा मन्त्रीको चेतमा रहेनछ ।
नेपाली समाजमा मान्छेले मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा अझै परीवर्तन आउन सकेको छैन । अझ दलित समुदायलाई राज्यले गर्ने व्यवहार पनि मन्त्री श्रेष्ठको पछिल्लो कदमबाट उदाङगीएको छ । कानूनतः मुलुक छुवाछुत मुक्त राष्ट घोषणा भएको डेढ दशक बितीसक्दा पनि मान्छेहरुले अझै दलित समदाय माथिको दमन÷ज्यादती र भेदभावलाई कम गर्न सकेका छैनन् । बुढापाकालाई देखाएर भेदभावलाइ लम्ब्याई रहन चाहने युवापुस्ता, सामाजिक सद्भावमा खलल् पुग्ने, सद्भाव भड्कने भन्दै यो विषयमा प्रवेश गर्न नचाहने राज्यका कारण अझै सयौं वर्ष जात व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन सक्ने देखिन्छ । ‘हामीले भेद्भाव गरेका छैनौं, पहिलो दर्जाका उमेर समुहका अर्थात् हाम्रा हजुरबाउ–हजुरआमाको शेषपछि हामी यो जातपात, छुवाछुत मान्दैनौं’, यो अहिलेका यूवापुस्ताको बनावटी जवाफ हो । अहिलेका यूवापुस्ताले आफ्नो घर बाहेक अन्यन्त्र जात व्यवस्थालाई मानेका त छैनन् तर उनीहरुकोे यस्तो वनावटी जवाफले भने जात व्यवस्थालाई लम्व्याउनै मदत गर्दछ ।
वास्तवमा अहिलेका यूवाले जात व्यवस्थालाइ कायम नराख्न, नमान्न दरीलो कदम चाल्न सक्नु पर्दथ्यो । वृद्ध आमाबुवा र हजुरवुबा हजुरआमाको मन दुख्ने बाहानामा जात व्यवस्था उन्मूलनबाट भाग्न खोज्नु अहिलेका यूवाको तागत कि कमजोरी ? भन्ने प्रश्न आउँछ । नपढेका, अनपढहरुले पढेका र विद्वानका कुरा नपत्याउने पनि कुरा हुन्छ र ? अहिलेका पढेलेखेका यूवाले यो जातजाती भनेको केही हैन । मान्छेको जात मान्छे नै हो उसको अरु कुनै जात छैन छैन भनेर बुझाउन सक्नु पर्छ कि पर्दैन ? अवश्य पनि पर्छ । जबसम्म युवाले यो जिम्मेवारीवाट पछी हट्छन् नि तबसम्म जात व्यवस्था जीवितै रहने छ । अर्को कुरा मलाई के लागेको छ भने, अहिलेका यूवा कानूनका जानकार छन् । कानून बुझेका छन् पढेका छन् । उनीहरुले जात व्यवस्थाको विरोध गर्नु र भेदभाव र छुवाछुत गर्नु हुन्न भन्नुको मुल कारण नै कानून हो । पढ्ने,लेख्ने, अघि बढ्ने र केही गर्ने उमेरमा कानूनको फन्दामा परे जीवनकै लक्ष्य र उदेश्य भेटाउन नसकिने, लक्ष्य र उदेश्यमा अवरोध हुने भएपछि उनीहरु तँ यो जात तँ त्यो जात भनेर समय बर्वाद गर्दैनन् । गर्छन् त उनीहरुले भोलिका दिनमा आफूलाई समेत काम लागोस्, दलितहरुले मन नदुखाओस भनेर जात व्यवस्थाको विरोध गरेको जस्तो मात्रै गरेका हुन् । उनीहरुले मुखले केही नभने पनि व्यवहारमा केही नदेखिए पनि घुमाउरो ढङ्गले जात व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरी नै रहेका छन् । त्यसको गतिलो उदाहरण रुपा सुनुवारको घट्नालाई लिएर सामाजिक संजालमा व्यक्त विचारहरुलाइ नै लिन सकिन्छ ।
‘वृद्ध आमाबुवा र हजुरवुबा हजुरआमाको मन दुख्ने बाहानामा जात व्यवस्था उन्मूलनबाट भाग्न खोज्नु अहिलेका यूवाको तागत कि कमजोरी ? भन्ने प्रश्न आउँछ । नपढेका, अनपढहरुले पढेका र विद्वानका कुरा नपत्याउने पनि कुरा हुन्छ र ? अहिलेका पढेलेखेका यूवाले यो जातजाती भनेको केही हैन । मान्छेको जात मान्छे नै हो उसको अरु कुनै जात छैन छैन भनेर बुझाउन सक्नु पर्छ कि पर्दैन ? अवश्य पनि पर्छ । जबसम्म युवाले यो जिम्मेवारीवाट पछी हट्छन् नि तबसम्म जात व्यवस्था जीवितै रहने छ ।’
अधिकांश यूवाले जातपात केही होइन तर.. भनेर घुमाउरा टिप्पणी गरेका छन् त कतिले त सिधैं जात व्यवस्थाकै पक्षमा भेदभावकै पक्षमा खुलेर टिप्पणी गरेकाछन् । एउटा यूवा जमात यस्तो पनि छ, दलित समुदायलाइ हामीले जे पनि गर्न हुन्छ भन्ने प्रकृतिको । जसका कारण सयौं दलित चेली बलात्कृत हुने, मारीने, वेपत्ता पारिने भएका छन् । यो सबै हुनुमा राज्य नै निरीह हुनु हो । यहाँ एउटा दलितले आफू पीडामा परेको र आफूमाथि अन्याय भएको भनेर न्यायका लागि जाँदा उल्टै अपमानित हुने, विभिन्न खाले धम्कीहरु दिएर मिल्न दबाब बढाउने, झुटो मुद्धा लागेर आफै थुनिनु पर्ने उदाहरण छन् ।
दलितका पक्षमा नियम कानून नबनेका पनि होइनन् प्रशस्त कानून छन् तर बनेका कानून कार्यन्वयन नभइदिँदा या भनौँ कार्यन्वयनमा आलटाल हुँदा कानून बन्नु र नबन्नुमा केही भिन्नता देखिँदैन । कानून कार्यन्वयनमा प्रमुखतः दलितलाइ हेर्ने सोच र गर्ने व्यवहारमै परिवर्तन हुन नसक्नु हो । त्यस्तै कानून कार्यन्वयन तहमै दलित समुदायको पहुँच नहुनु पनि हो । यावत् कारण छन् जसका कारण नेपलमा कानून बनेर पनि व्यवहारमा मान्छेका दर्जा पाउन नसकेको समुदाय नै दलित समुदाय हो ।
प्रसंग पुनः रुपा सुनुवार काण्डकै, रुपाको घट्नामा संलग्न दोषी मानिएको सरस्वती प्रधानलाइ मन्त्री श्रेष्ठले हाकाहाकी छुटाएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भयो । धेरैले उनको राजीनामाको समेत माग गरे । यो विषयले यतिबिघ्न चर्चा पाउँदा समेत न उनै मन्त्रीले नै चुइक्क बोलेका छन् न त देशकै प्रधानमन्त्रीले । सरस्वतीलाई छुटाएर आलोचित भएका मन्त्रीले दुइ शब्द खर्चेर माफी समेत मागेनन् । उनले दलित त मान्छे नै होइनन् भन्ने ठानेर माफी माग्न आवश्यक ठानेनन् शायद । मन्त्री श्रेष्ठ त ग्वाँच भए भए कमसेकम देशको प्रधानमन्त्रीले पनि त यो घटनामा केही बोल्नु पर्ने थियो, किन बोलेनन ? रुपा घटनामा किन मौन छन् देशका प्रधानमन्त्री ? किन प्रधानमन्त्रीले दलितका विषयमा उनीहरुको पक्षमा बोल्नु हुदैन र ?
‘को हुन दलित ? उनीहरुको उत्पत्ति कुुन अन्य बाहिरी संसारबाट भयो ? र धर्तीको सुन्दर स्थान नेपाल भन्ने ठाउँमा आएर छोइछिटो गरे ? अब यी अछुत भनाउँदाहरुको भविष्य के हुन्छ ? यि तमाम सवालको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिन जरुरी छ । देशको प्रधामन्त्रीको हैसियतले, जातपात छुवाछुत केही होइन् हामी मान्दैनौं भन्ने देशकै ठुलो पार्टीको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्छ ।’
हुन त नबराज विकसहित ६ जना यूवाको नरसंहार भएको घटनामा माखो मार्न नसकेको ओली नेतृत्वको सरकार र प्रधानमन्त्रीले रुपाको घटनालाइ सामान्य ठान्नु स्वाभाविक नै होला । तर एसियाका टपटेन कहलिएका, दूरदर्शी र राष्ट्रवादी कहलिएका, देशविदेशमा चिनीएका, इतिहासका जानिफकार धर्मशास्त्रका विज्ञ मानिएका भनिएका देशको प्रधानमन्त्रीले दलित समुदायको इतिहासबारे बोल्नु पर्दैन ? को हुन दलित ? उनीहरुको उत्पत्ती कुुन अन्य बाहिरी संसारबाट भयो र धर्तिको सुन्दर ठाउँ नेपालमा आएर छोइछिटो गरे ? अब यी अछुत भनाउँदाहरुको भविष्य के हुन्छ ? यि तमाम सवालको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिन जरुरी छ । किनकी रुपाको घट्नामा प्रधानमन्त्रीज्यू कै मन्त्री मुछिएका छन्, त्यसकारण मात्रै पनि हैन देशको प्रधामन्त्रीको हैसियतले, जातपात छुवाछुत केही होइन् हामी मान्दैनौं भन्ने देशकै ठुलो पार्टीको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्छ ।
अरु थुप्रै कारण पनि छन् प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई शक्तिशाली बनाउने तिनै ६० लाख दलित होइनन् ? अहिले शक्ति संर्घषको कठिन मोडमा पनि प्रधानमन्त्री कै कित्तामा उभिएर दलितले जयजयकार गरी रहेका प्रधानमन्त्रीले देखेका छन् कि छैनन् ? उत्पीडणको दर्द भुलेर मुक्तिको झिनो आशा पालेर प्रधानमन्त्री र सरकारकै जयजयकारमा तल्लीन देशकै झण्डै एक चौथाई नागरीकको सन्र्दभमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नै पर्छ । भोलि चुनाव हुँदैछ फेरी पनि दलितको भोट सुनिश्चत गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू अब दलितको भविष्य के हुन्छ ? जातीयताको यो अमानवीय पीडा १४ वर्ष जेलमा बसे भन्दाबढी असह्य छ । त्यसैले दलित र गैरदलितबीचमा उत्पन्न विवाद निरुपणमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका अपरिहार्य छ ।–सोम दियाली